Kaspersky OS: iyo nyowani yakachengeteka inoshanda sisitimu iyo inogadzirira siginecha | Linux Vakapindwa muropa
Kaspersky OS: iyo nyowani yakachengeteka sisitimu inoshanda iyo inogadzirira siginecha
Iyo inozivikanwa kambani Kaspersky Antivirus Inoita kunge Iri Kuvandudza Yayo Yega Inoshanda Sisitimu akachengeteka, izvi zvakasimbiswa nemumwe wevashandi vake. Pamwechete, iyi sisitimu inoshanda haizove inowanika kumaPC, asi ichagadzirirwa zvigadziriso nemaindasitiri, kunyanya switch iyo inoronga kuvhura kubatana kwezvikamu izvi panonyanya kuchengetedzwa zvirinani. Asi hapana hurongwa hwakachengeteka zvachose, pamwe hatifanire kuzvibvunza kuti hazvizopindike here, mubvunzo ndewekuti riini?
Ichi chishandiso chichava chekutanga kushandisa Kaspersky OS. Zvinoenderana nekambani yeantivirus, kana munhu anorwisa achida kutyora chikuva, vanofanirwa kutyora siginicha yedhijitari, chimwe chinhu chinganetse zvakanyanya pasina makomputa ehuwandu ane simba rakanyanya remakomputa pane midziyo yatinayo iye zvino. Iyo sisitimu chimwe chinhu senge OS iyo Microsoft yakagadzira zvichibva paLinux kune ma routers uye mamwe maratidziro eneti ...
Chinhu chinoshamisa ndechekuti Kaspersky haana kushandisa Linux sehwaro hwehurongwa hwairi kuvandudza, zvinoita sekunge yakasarudza kugadzira tsanga yako kubva pakutanga. Iyo nyowani microkernel yerudzi rwepakati uye chikonzero chinoratidzika kunge chiri kuseri kwebasa iri kugadzira hurongwa hwakagadzirwa uye nekuchengetedzeka pane kutora chimwe chinhu chakatogadzirwa nekuchisimbisa. Kunyangwe ichidhura, programmes dzekambani dzinoita sedzine chokwadi kuti izvi zvinoita kuti zvive zvakaoma kutyora.
Ini ndinofungidzira iyo inoshanda sisitimu haazove akasunungukaIchave yepamutemo uye Kaspersky anochichengetedza pamwe nekufungidzira kuitira kuti makwikwi arege kuikopa uye nekudaro ave nemukana nemidziyo iyi iyo iyo ichatanga pamusika. Pasina kupokana, kana iwe ukafunga kuivhura, chingave chirongwa chinonakidza kubhurawuza uye kuona izvo zvakavanzika zvazvinobata kuti zvive zvakachengeteka. Kana rumwe ruzivo ruchizivikanwa nezve ino isinganzwisisike sisitimu yekushandisa, isu tinenge tichazopa rumwe ruzivo ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Kaspersky OS: iyo nyowani yakachengeteka sisitimu inoshanda iyo inogadzirira siginecha
Zvakanaka, kuve wakasimba kuitira kuti inyatso chengeteka, inofanirwa kunge iri yemahara kana iri yevaridzi, chii chinovimbisa kuti kambani haisiye madhoo ekumashure nekuvandudzwa kunopfuurira kudzivirira kusagadzikana?
ReactOS 0.4.3: iyo yakavhurwa sosi Windows yakaburitsa zviri pamutemo